काम गर्नै पाइएको छैन, खर्च कसरी जुटाउने ? « Ghamchhaya
काम गर्नै पाइएको छैन, खर्च कसरी जुटाउने ?
प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७६, बिहीबार १६:२९
“विदेशिएका नेपाली माथि कोरोना कहर”
विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारी का कारण आफ्नो स्वास्थ्य जोखिमा रहक अष्टेलियामा भएको लक डाउनले विदेशीएका नेपालीलाइ कोठा भाडा र घरायसी खर्च जुटाउने चिन्ताले थालेको छ ।
अस्ट्रेलियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार अपरान्ह सम्ममा त्यहाँ २ हजार सात सय ९९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमित देखिएको छ भन्ने मृतकको संख्या ११ पुगेको छन् । पछिल्लो २४ घन्टामा मात्रै संक्रमित हुनेहरुको संख्या तीन सय ७६ रहेको छ ।
अस्ट्रेलियामा पढ्न गएकी नेपाली याग्जेंन ह्योल्मोले आफ्नो र त्यस्तै दुःख पाएका नेपाली विद्यार्थीको समस्या सम्बोधन गर्न अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदुतावासलाई गुहार लगाउनुभएको
सिड्नीस्थित एक पाँच तारे होटेलमा काम गरेर पढाइ तथा बसोबास खर्च जुटाउँदै आएकी उहाँ अहिले प्रकोपका कारण बरोजगार हुनुहुन्छ । खर्च नहुँदा कोठा भाडा तिर्नसमेत कठिन भएको सामाजिक संचालमार्फत घामछायाँसँग कुरा गर्दै उहाँले बताउनु भयो । अहिले अस्ट्रेलियामा सेनिटाइजर समेतको अभाव छ । पहिले १४ अस्टिेलियन डलर मा पामिअहिले चालीसदेखि साठी डलर पर्छ उहाँले बताउनु भयो । सरकारले लकडाउन गर्ने भन्ने सुनेको छु । पुरै सिड्नी लकडाउन भयो भने नेपाली विधार्थीलाई कोठाको भाडा तिर्न र खानसमेत् अप्ठ्यारो हुने अवस्था छ । त्यसका लागि सरकारले केहि थोरै मात्र सम्बोधन गरिदिए पनि ठूलै सहयोग पुग्ने पनि उहाँले घामछाँयालाई बताउनुभयो ।
यसैगरी अर्की नेपाली छात्रा निरु सुनुवार काम नभएका कारण आज भोलि कोठा मै रहन
परेकोले कोठाको भाडा तिर्न लगायतका आवश्यक खर्च जुटाउन कठिन भइरहेको बताउनु हुन्छ । आफूलाई चाहिने सामानकै जुटाउनै गाह्रो भएको बेला कसरी कोठाको भाडा तिर्ने ?, उहाँको प्रश्न छ ।
धेरै जसो नेपाली विद्यार्थी सिड्नीमा लकडाउन लम्बिए सामान्य स्थिति हुँदासम्मका लागि नेपाल आउन चाहन्छन् । यसका लागि १४ दिने क्वारेन्टाइन लगायतका व्यवस्था सरकारले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने धारणा पनि उनीहरुको छ ।
२४ सै घन्टा व्यस्त रहने सिडनीको यो ठाउँ अहिले उराठलाग्दो बनेको छ
“पुरै सिड्नी लकडाउन भयो भने मेरा लागि स्वदेश फर्किनु नै सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो” अर्की विद्यार्थी डेचेन लामा बताउनुहुन्छ । उहाँ अहिले सिड्नीमा अध्यन गर्दै हुनु हुन्छ । उहाँका अनुसार हामी नेपाली अध्यनका लागि आएका विद्यार्थी प्रकोपसँगै अभावबाट समेत पीडित छन्। सरकारसँग यति अनुरोध गर्नु चहान्छु लकडाउन भएको खण्डामा नेपाल आउन मिल्ने अवस्था मिलाउनु पर्यो कि त हामीलाई यहीँ बस्नका लागि केही सहयोग गरिदिनुहोस्, लामाको भनाई छ ।